Ungayiphatha kanjani imoto yakho nge-Odoo? | Kusuka kuLinux
Ngiphatha futhi ngazi izinhlobo ezahlukahlukene ze isoftware yomthombo ovulekile yebhizinisi, kodwa ngaphandle kokwesaba ukuthi ngiyobe ngikucabanga lokho Odoo Ingenye yezimo ezinamathuba amaningi okuzivumelanisa nanamuhla, ngoba ngenxa yesakhiwo sayo, umphakathi wayo kanye nokusebenziseka kwayo okulula, ivumela ukusebenza okwenzelwe cishe noma iyiphi imodeli yebhizinisi noma umsebenzi.
Kulula futhi kuyashesha ukufeza lungisa i-Odoo cishe kunoma iyiphi imakethe Ngenxa yenani elikhulu lamamojula atholakalayo, ukukhululeka kokuqonda ikhodi yomthombo nemibhalo emikhulu etholakele yokwenza ngcono i-ERP esivele isinikeza isisekelo esiqinile esivumela ukuthi sisetshenziswe ezinkampanini ezincane, eziphakathi nendawo nezinkulu .
Ingxenye ebaluleke kakhulu kumamodeli amaningi webhizinisi lanamuhla yiyona ukuphatha izimoto zakho (ikakhulukazi lawo mabhizinisi aphethe ukuthengiswa kwemikhiqizo ebonakalayo noma ukudluliswa kwemikhiqizo), le nqubo elula yokuthi kwezinye izimo idinga ukulawulwa okuthuthukile ivame ukwenziwa kumaspredishithi okuthi ezikalini ezinkulu kugcine sekuyindlela enzima kakhulu futhi enethuba elikhulu lokulahleka kolwazi noma lokungalawulwa. Ukucabanga ukuthi le nqubo ingasebenza kahle, kuyinto ebaluleke kakhulu ezinhlanganweni eziningi nokuthi i ukuphathwa kwezimoto okulungile ivumela ezimweni eziningi khulisa inzuzo noma ukunciphisa izindleko, U-Odoo usebenzise inqubekela phambili yokuphathwa kwemikhumbi, ongumthombo ovulekile, okhululekile, futhi osebenza kahle.
1 Luyini uhlelo lwe-Odoo Fleet Management?
2 Izici ze-Odoo Fleet Management System
3 Ungayilungisa kanjani i-Odoo Fleet Management System?
Luyini uhlelo lwe-Odoo Fleet Management?
El Uhlelo lwe-Odoo Fleet Management, Ithuluzi elithuthukile lelo ikuvumela ukuphatha zonke izici zezimoto zenkampani, kufaka phakathi izici zemoto ezifana nomkhiqizo, umbala, izihlalo, umshayeli, ipuleti lelayisense, uphethiloli, phakathi kokunye. Ngendlela efanayo, kusinikeza ithuba lokuthi phatha imininingwane ephathelene nezimoto ezifana nezinkontileka, izindleko, umshuwalense, izibonelelo, ukusetshenziswa, njll., konke lokhu kusuka kusixhumi esibonakalayo enembile, ngokushesha nangempumelelo.
Ngohlelo lwe-Odoo Fleet Management singakwazi sibe nokuqapha okuvuselelwe okusivumela ukuthi siqophe ukusetshenziswa nezindleko ezihambisana nemoto, esizokwazi ukubonisana nayo ngokushesha futhi nemibiko ehlukaniswe izinsuku noma izinkathi. Ngokufanayo, ithuluzi lisinikeza Izaziso ze-imeyili ezihambisana nokuphelelwa yisikhathi kwezivumelwano ezixhunyaniswe nemoto, engezwe kulokhu, kusinikeza ithuba lokuhlaziya kahle izindleko zayo yonke imikhumbi yethu, esivumela ukuthi senze ukuhlaziywa okusheshayo kwezinqumo ezizothathwa ekusimameni nasekusebenzeni kwezimoto zethu.
Uhlelo lwe-Odoo Fleet Management lungahlanganiswa namanye amamojula ahlukahlukene atholakala kule nkundla, ngakho-ke singahlanganisa nezindleko zikaphethiloli nezindleko zabasebenzi bethu noma siqophe ngokuzenzakalela ukunyakaza kwemikhumbi emibikweni yethu yokubalwa kwemali, konke kusuka kuthuluzi elilodwa nangezinqubo ezizenzakalelayo.
Izici ze-Odoo Fleet Management System
Odoo's advanced Fleet Management System inezici ezahlukahlukene, phakathi kwazo esingaziqokomisa:
Ikuvumela ukuthi ugcine imininingwane eningiliziwe ngemoto efana nokwenza, imodeli, ipuleti yelayisense, inombolo ye-chassis, inani leminyango nezihlalo, umbala, uhlobo lukaphethiloli osetshenzisiwe, phakathi kokunye.
Singarekhoda imininingwane yabashayeli (igama, ilayisense yokushayela, i-ID, ucingo, njll).
Ivumela ukufakwa kophawu lwezimoto ukuze sikwazi ukuzihlukanisa ngokuya ngezimpawu esizifunayo, isibonelo, izimoto zethu, izimoto eziguqukayo, eziseduze, njll.
Izinhlobo ezahlukahlukene zedatha yokusebenzisa leli thuluzi ngokuyimpumelelo, amakhosi amakhulu yilezi: Imodeli Yezimoto, Ukwenziwa Kwezimoto, Isimo Sezimoto, Uhlobo Lwezinsizakalo, Amathegi Ezimoto, Izimoto nabashayeli.
Ikuvumela ukuthi uphathe noma yiziphi izinkontileka ezahlukahlukene kanye nezivumelwano zokuqashisa ubheka ukusebenza kwazo kanye nosuku lokuqedwa kwazo, kanye nezindleko zokuqala zenkontileka kanye nezindleko eziphindaphindayo, ngendlela efanayo, ithumela umyalezo we-imeyili lapho lezi zinkontileka sezizophela.
Inokuphathwa okuthuthukile kwe-odometer yemoto ongayihlanganisa nerekhodi lokusetshenziswa kukaphethiloli, okusivumela ukuthi sazi ukusetshenziswa kwephethiloli ngekhilomitha ngalinye eliba ukuphathwa okuthuthukile kwezindleko.
Ivumela ukugcina umlando kanye nerekhodi lesondlo elihlotshaniswa nemoto, kanye nethuba lokuhlela isondlo esishiwoyo ngemuva kwesikhathi esibekiwe, zihlobene nezindleko zenhlangano.
Inemibiko esheshayo nethuthukile esivumela ukuthi sibe nomqondo ocacile wezimoto zethu kanye nemikhumbi yethu jikelele.
Kungenzeka ukuhlanganiswa namathuluzi wokuqapha wangempela wesikhathi.
Ihlanganiswe nawo wonke amamojula we-Odoo.
Abanye abaningi ngaphezulu.
Ungayilungisa kanjani i-Odoo Fleet Management System?
Uhlelo lwe-Odoo Fleet Management luphakathi kwamamojula omdabu e-Odoo Community and Enterprise, kufanele nje sifake uhlobo esiluthanda kakhulu, iya kuthebhu ye-APP bese wenza kusebenze imojuli yeFleet, imodyuli ayidingi noma iyiphi ukumiswa kobuchwepheshe njengoba kudala ngokuzenzakalela konke ukucushwa okudingekayo.
Ukuqala ukwenza ipharamitha ibe yiparameter, kufanele simane sisebenzise imodi yonjiniyela ye-odoo yethu, bese siya kwimenyu yemikhumbi bese ubheka iseshini Yokucushwa, kuyo sizothola uchungechunge lwenkosi esiyichaza ngezansi:
Umkhiqizo wemoto: Singakha noma yiluphi uhlobo lwemoto futhi sihlobanise isithombe esimele nayo.
Imodeli Yemoto: Sakha amamodeli ezimoto esingawahlanganisa noMkhiqizo futhi sichaze nomhlinzeki ongazithengisi.
Isimo Semoto: Le nkosi ichaza izifundazwe imoto engaba nazo uma isebenza, ingasebenzi, iyathengiswa noma ilimele.
Uhlobo Lwezinsizakalo: Singabhalisa zonke izinsizakalo noma izinkontileka ezingabangelwa yimoto, njengezimpahla ezisetshenziswa njengezingxenye zokulondoloza, ukuqashisa noma izinsizakalo zokushintsha isondo.
Amathegi Ezimoto: Le nkosi isinikeza ithuba lokuhlukanisa noma ukufaka ilebula ezimotweni zethu ngezimpawu ezahlukahlukene ezifana nohlobo lwemoto (iSedan, Convertible), uhlobo lwesimo (esithengiwe, esiqashiwe) noma ngubani nje ongasebenzisa imoto (abasebenzi, abaphathi).
Lapho nje amakhosi esedaliwe, kufanele simane sibhalise izimoto zethu esizozihlanganisa nomkhiqizo, imodeli, ipuleti lelayisense, umshayeli, izakhiwo zazo, inani lazo nosuku lokutholwa kwazo, phakathi kwezinye izici.
Ngemuva kwalokho kufanele sibhale phansi izinkontileka ezihambisana nemoto, i-odometer yemoto, ukusetshenziswa kukaphethiloli, izinsizakalo ezihambisanayo nokugcinwa kwayo, okuzokondla ngokuzenzakalela umlando wezindleko zemoto, okuzosivumela ukuthi sibheke imibiko yethu yezindleko nezindleko .
Ngale ndlela, u-Odoo usinikeza ithuluzi elilula esizolisebenzisa kepha lokho kunomthelela omkhulu ekuphathweni kwemikhumbi yenkampani yethu, okusivumela ukuthi sibe nerekhodi ngaso sonke isikhathi sesimo nezindleko ezihambisana nezimoto zethu, eziqinisekisa nokuthi siyahamba ukwazi ukwaziswa lapho kufanele senze isiqinisekiso esisha noma inkontileka yesevisi, noma ukuthi kufanele senze isondlo sokuvikela.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Ungayiphatha kanjani imoto yakho nge-Odoo?
JORGE RIOS kusho
Ngibe nethuba lokuhlola iFleet Management ne-ODOO, futhi ngemuva kwakho konke engikufundile mayelana nomkhiqizo, empeleni bengilindele okuningi kakhulu. Ngiphoxekile ngokusebenza okuyisisekelo enakho, akunikezeli ukusebenza kwamamayela ezimoto, ngokusetshenziswa kophethiloli, akuvumeli ukugcina ikhathalogi yezingxenye ezisele ezizosetshenziswa emikhunjini, ayilawuli amathangi kaphethiloli wezimoto, ayilawuli ushintsho lwamasondo nomazisi besondo ngalinye, alunalo uhlelo lokuhamba lwemoto ngayinye, alulawuli izinqubomgomo zomshwalense, alilawuli izincwadi zokushayela, alilawuli izimangalo zemoto. Ngiyethemba lokhu kuhlaziywa okufushane kuzokusiza. Jabulela
Phendula ku-JORGE RIOS
Umhlangano wabachwepheshe be-SUSE eBarcelona